Gujiitti weerarri dhibee koleeraa sodatamaa jira. Jiraattonni hanqina bishaan dhugaatitiin rakkataa jirra jedhu. - OMN
(Gujii, Oromiyaa, Wax.18, 20170) – Godina Gujii lixaa Aanaa Dugda-Daawwaa magaalaa fincaa’atti, gandoonni hedduun bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuun rakkoo hamtuuf saaxilamaniitiin akka jiran maddeen keenya Go/gujii irraa OMN tti himaniiru.
Kuusaan bishaan dhugaatii kan waggoota dheeraaf hawaasa tajaajilaatiin ture guutumaan guututti hojii kan dhaabe waan ta’eef,ummanni bishaan qoonqotti dhugu barbaachaaf hanga KM 7 deemudhan Jeerkaana tokko hanga Birrii 10tti bitachuun fayyadamaa akka jiranii fi namoonni humna maallaqaa bishaan kana ittin bitatani hin qabne garuu, eela bishaanii ykn haroo xixxiqqoo coba roobaatiin ededaatti eelte woraabbatanii dhuguuf dirqamaniiru jechuun jiraataan magaalaa Fincaa’aa tokko dubbateera.
Ummanni aanaa kanaa rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu kanaan wal qabateen dhukkuboonni daddarboon kanneen sababa qulqullinna bishaaniitiin dhufaniin miidhamu malla jechuudhaan, sodaa guddoo keessa akka jiranillee namni kun itti dabaluun ibseera. Keessattuu yeroo ammaa kana weerarri dhukkuba koleeraa godinaalee akka Baalee fi harargee bahaa keessatti namoota hedduu lubbuu gaaga’atiin akka jiru beekkamadha.
Gama mootummaatiin rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa kanaa furuuf tattaaffiin godhame tokko illee akka hin jirre fi rakkoon kun aanaalee Go/ Gujii lixaa hedduu keessatti babal’achaatiin akka jiru jiraattonni komii qaban dubbachaatiin jiru.
OMN- Maaddii Ispoortii (LIVE) Wax 18, 2017
OMN: Oduu ( wax 18, 2017)